शिक्षक सेवाको बिज्ञापन अन्तिम चरणमा : कुन तह र बिषयमा कति सख्या खुल्छ ?
गृहपृष्ठ » शिक्षा » शिक्षक सेवाको बिज्ञापन अन्तिम चरणमा : कुन तह र बिषयमा कति सख्या खुल्छ ?
काठमाडौ । अहिले नेपालभर झण्डै ५९ हजार शिक्षकको पद रिक्त छ ।
सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेपनि शिक्षककै अभावका कारण यो क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।
शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा खुला विज्ञापन गर्ने तयारी गरिरहँदा मुख्य तीन विषयमा शिक्षक दरबन्दी न्यून देखिएको छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगलाई पठाएको रिक्त दरबन्दीअनुसार विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयमा देशभर धेरै शिक्षक अभाव भएको उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी विषयमा ६ सय २२, नेपालीमा ४ सय ३६ र विज्ञानमा ४ सय ४० दरबन्दी रिक्त रहेको छ । माध्यमिक विद्यालय तहको विज्ञान ४ सय ३३, अंग्रेजीमा ३ सय १३ र नेपाली २ सय ३० शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
त्यस्तै, ऐच्छिक विषयमा १ हजार ५ सय ४२ शिक्षक पद रिक्त छ । केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगमा पठाएका विवरणअनुसार निमावि र माविमा नेपाली र विज्ञान विषयमा धेरै शिक्षक दरबन्दी अभाव देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आयोगले शिक्षक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि केन्द्रसँग आवश्यक पदपूर्ति गर्न रिक्त शिक्षकको संख्या माग गरेको थियो । केन्द्रले आयोगमा पेस गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी प्रावि तहमा १२ हजार ९ सय १२ दरबन्दी रिक्त छन् ।
मावि तहमा १ हजार ५ सय ४२ र निमाविमा २ हजार ५ सय ९३ पदमा खुला विज्ञापन गरी शिक्षकको पदपूर्ति गर्नेछ । दरबन्दीअनुसारको विज्ञापन गर्दा खुलातर्फ निमाविको सामाजिक शिक्षामा ३ सय ५२, विज्ञानमा ३ सय ६४, गणितमा ३ सय ७० दरबन्दी रिक्त छ ।
सदस्य सचिव श्रेष्ठले पदपूर्ति खुला गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । आयोगमा पुगेको विवरणअनुसार माध्यमिक तहमा नेपाली २ सय ३०, सामाजिकमा २ सय १, गणित २ सय २८ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको विवतरण आयोगमा पठाएको छ ।
आकर्षक तलबसहित विभिन्न पदका लागि कर्मचारी चाहियो [विज्ञापनसहित]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जागिर सम्बन्धि अति जरुरी सूचना
इजरायल जानेको नतिजा सार्वजनिक, यस्तो अवस्थामा पास भएपनि दरखास्त रद्द
इजरायल जानेहरूको भाषा परीक्षा आज, १६ परीक्षा केन्द्र तोकिए [केन्द्रसहित]
लघुवित्तद्धारा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग, आठ कक्षा पासदेखि स्नातकोत्तरसम्मलाई अवसर
नेपाली सेनामा ४ हजार पदमा भर्ना खुल्यो [ विज्ञापनसहित ]
नेपाली सेनाद्धारा ४००० दरखास्त आह्वान, ८ कक्षा उर्तीणले पनि आवेदन दिन सक्ने [विज्ञापन]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा ठूलो संख्यामा विभिन्न पदमा जागिर खुल्यो [ विज्ञापनसहित ]
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जागिर सम्बन्धी सूचना
छात्रवृत्ति छनोटका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना प्रकाशित
भ्रममा नपर्नुहोस् : रोजगारीका लागि इजरायल यसरी जाने हो, थाहा नपाएर लुटिनुहोला !